Free Burmese Lesson - Lesson 1 - Greetings - Learn Burmese with L-Ceps Language Learning Breakthrough
Mingalar Par Shin…
Kaung Par Tal, Kyay Zu Tin Par Tal Shin..
ကဋ္ဋန်မနာမည်က တန်ဂဵာ ပၝ။
Kyama nar-mal Ka Tan Ja Par
Twe Ya Tar Wan Tar Par Tal
Twar Lite Par Ohn Mal
ကဋ္ဋန်တော်ူမန်မာလို ကောင်းကောင်း မေူပာတတ်ဘူး။
Kyataw Myanmar Lo Kaung Kaung Ma Pyaw Tat bu
ဟုတ်ကဲ့။ ကဋ္ဋန်တော်ူမန်မာလိုေူပာတတ်ပၝတယ်။
Hote kae, Kyataw Myanmar lo Pyaw tat par tal
ရငြ် အဂဿလိပ်လိုေူပာတတ်လား။
Shin English Lo Pyaw Tat Lar?
ဟုတ်ကဲ့။ ကဋ္ဋန်တော် အဂဿလိပ်လိုေူပာတတ်ပၝတယ်။
Hote Kae, Kyataw English Lo Pyaw Tat Par Tal
ဟင့်အင်း။ ကဋ္ဋန်တော် အဂဿလိပ်လို မေူပာတတ်ဘူး။
Hint Inn, Kyataw English Lo Ma Pyaw Tat Bu
တဆိတ်လောက်။ ရငြ်ူမန်မာလိုေူပာတတ်လား။
Tasait Lout, Shin Myanmar lo Pyaw tat lar?
ရငြ်ူမန်မိာိုံင်ငံကို သဘောကဵလား။
Shin Myanmar Naing Ngan Ko Thabaw Kya Lar?
ဟုတ်ကဲ့။ူမန်မိာိုံင်ငံက အလန်ြလပြၝတယ်။
Hote Kae, Myanmar Naing Ngan Ka Ah Lun Hla Par Tal